Codka Dhalinta Soomaaliyeed. | Codka Shacabka Soomaaliyeed
Codka Dhalinta Soomaaliyeed.
27/04/2012 — Codka Shacabka Soomaaliyeed
4 Responses to “Codka Dhalinta Soomaaliyeed.”
Assalama alaikum , walal aad iyo aad baad uu mahadsantahay . we somali youth should have to stand up and am going back home .maybe i change anything and you guys plz stand up not only talking it doesnt change anything … somali hanoolato insha Allah sinaan iyo wadaninimo
Codka Shacabka Soomaaliyeed Says:
Walaal adaa mudan Kauthar.
Waa run inaanaysan hadal wax tareynin oo loo baahan yahay wax qabad. laakiin hadalka ayaa wax qabadka dhaliya, qaabka wax loo qaban karana waxaa ugu horeeya DHALINYARADA oo fahanta inay isu baahan yihiin oo aysan kala maarmin DADKOODA iyo DALKOODANA u istaagaan oo ku sabra imtixaanka adduunyada.
SXB wax badan oo wanaag ah ayaan qaban karnaa waase inaan aaminno inaan wax qaban karno.
CabdiXakiim waa ku salaamahayaa. Khudbadaadu waa fiicantahay. Waxa fiicnaanlahayd adigoo shirka xisbigeenii HaNoolaato ka jeediyo. Waan ka xumahay inaad ka baxday xisbigeenii oo aad nimankii aynu colka ahayn ee Muqdisho burburiyay u gasho.
SXB waan ku salaamay marka ugu horeysa. Waana ku faraxsanahay inaad dhageysatay qudbadaas. SXB weli Cabdihakiin baan ahay, fikradaheyguna waa kuwa aad aragtay, laakiin howl ayaa loo baahan yahay, oo wax badan ayaa naga dayacan. Annigu waxaan soo dhoweynayaa qof kasta oo dadka iyo dalka wax u qabanaaya welina waxaan u heystaa in Hanoolaato fursad fiican lee dahay haddii ay sida hadda ay tahay si ka fiican ku howl gasho.
« Dawlad Goboleedyada iyo Dhalinta Maanta.